Mayelana NATHI | Zhejiang Shawei Digital Technology Co., Ltd.
IShawei Digital itholakala esifundazweni saseZhejiang, eyasungulwa ngo-1998, ingcweti ku-Indoor and Outdoor Advertising Media. UShawei Digital ungumnikazi wamagatsha ayi-11 kulo lonke elaseChina, ibhizinisi limboza ukukhiqiza, ukuthengisa, ukuthekelisa kanye nokuphrinta.
Imikhiqizo eyinhloko yokuncintisana yi-Self Adhesive Series, Light Box Series (Frontlit ne-Backlit), i-Wall Decoration Series ne-Display Props Sereis. Imidiya imboza kusuka kumaseli kuya odongeni kuya phansi, efanelekile kuDayi, i-Pigment, i-UV, i-HP Latex, i-Solvent ne-Eco-solvent.Shawei Digital igcina ukuqamba kusetshenziswa, kanye nemikhiqizo emisha ethuthukayo. emakethe, lo mkhiqizo uhlanganisa imithombo yezindaba yokuphrinta enkulu futhi iMax Width ingu-5M. Futhi umkhiqizo we-MOYU uphinde unikeze imidiya yokuphrinta ye- "PVC Free" ukuphendula ku-Green Environment Protection.
IShawei Digital inganikezela ngosayizi ohlukile kusuka ku-Jumbol roll, i-mini roll kuya kumashidi nosayizi we-A3 / 4.Zama konke okusemandleni ukuhlangabezana nezidingo zakho.Imikhiqizo iyathengiswa okushisayo eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eYurophu, eningizimu mpumalanga ye-Asia.
Yonke ikhwalithi yemikhiqizo ilawulwa ngokujulile ngohlelo lwethu lwe-QC, zonke izinto zikhiqizwa esitolo somsebenzi esingenathuli futhi sine-R & D yethu ukuhlola yonke inqubekela phambili. Okwamanje, ukugeleza kwe-QC kuzosebenzisa imishini esezingeni eliphakeme ukubheka umugqa kusuka kokungavuthiwe kuya emikhiqizweni yokugcina.
Amalungu ethu omndeni wakwaShawei ayiphatha ngokungathi sína yonke imininingwane. Sihlala lapha futhi sikhula ndawonye nenkampani ye-ou. IShawei, MOYU, iGomay eminye imikhiqizo ithola idumela elihle emakethe yethu futhi sinikeze izixazululo ezihambisanayo zamabhizinisi athile awaziwayo njengeWalmart, iDHL, iPepsi njalonjalo.
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono emakethe ye-ou, sihlala njalo siya eSGIA, APPP, SIGN CHINA, embukisweni weFESPA emhlabeni wonke, siqoqe impendulo yamakhasimende ethu futhi sibenzele izinto ezintsha. I-Shhawei Digital iyiqembu elingakunika:
Iqembu lobuchwepheshe elinamandla
Sineqembu eliqinile lobuchwepheshe embonini, amashumi eminyaka wesipiliyoni sobungcweti, izinga lokuqamba elihle kakhulu, okwenza ikhwalithi ephezulu yekhono lokusebenza kahle.
Imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle nesikweletu ukusivumela ukuthi sikwazi ukusetha amahhovisi egatsha nabasabalalisi ezweni lethu. Imikhiqizo yezinhlobonhlobo engaphezu kuka-1000 ingaba ukukhetha kwakho okuhambisanayo.Umkhiqizo wemikhiqizo umboza kusuka endlini kuya ngaphandle.